Faah faahin:- Weerar madaafiic ah oo saqdii dhexe xalay lagu qaaday deegaanka Biyo-Cadde – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar madaafiic ah oo saqdii dhexe xalay lagu qaaday deegaanka Biyo-Cadde
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa tiro madaafiic ah oo xalay saqdii dhexe ay dagaalyahanadda Al-shabaab ku qaadeen saldhig ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin deegaanka Biyo-Cadde ee gobolka Sh/hoose.
Madaafiicdaas oo illaa iyo haatan aan la ogeyn tirada ay ahaayeen ayaa la sheegayaa inay ku dhaceen saldhiga ciidamada AMISOM ee deegaanka Biyo-Cadde, sida ay warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Illaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, waxaana weerarka madaafiicdaasi kadib halkaasi dagaal culus ku dhexmaray ciidamada dowladda oo garab ka helaaya kuwa AMISOM iyo dagaalyahanadda Al-shabaab.
Dadka deegaanka Biyo-Cadde ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in wal-wal aad u xoogan uu lasoo gudboonaaday xilliga madaafiicda halkaasi lagu garaacayay.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka deegaanka Biyo-Cadde ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiisha Al-shabaab, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalka iyo weerarka halkaasi ka dhacay.
Dagaalyahanadda Al-shabaab ayaa bishaan Ramadaan fullin howgal weyn, iyadoo la fillaayay inay qaadi doonaan weerarro waaweyn sida hore looga bartay.